Fahamehana ara-pahasalamana Mety hihamafy kokoa ireo fepetra...
Manome tsiny fitondram-panjakana hatrany, izay raha jerena ny fihetsiky ny ankamaroan’ny malagasy hatreto nandritra izay fihibohana izay.
Iaraha-manaiky ny fisian’ny fahasahiranana saingy raha ny hita aloha dia tena hamaivanin’ny maro mihitsy ity fipariahana valan’aretina eto Madagasikara ity, indrindra, taorian’izay hoe nahitana fanafody izay. Rano atondraka an-damosin’ny gisa ilay teny hoe mbola anaty ady isika. Tsy manam-piniavana ny hihafy fa dia mitohy ara-bakiteny hatramin’ilay antsoin’ny tanora hoe revy, raha ny hita eny rehetra eny. Raha sanatria angamba izany tena misy manafika mihitsy ny firenena dia hiteny ireo olom-pirenena hoe izahay tsy hiady fa hoatrinona aloha ny tambin-karama amin'io. Ny fahavalo anefa efa manani-bohitra. Tena azo inoana ve fa ireny olona rehetra mivoaka ireny dia tsy maintsy hoe mandeha miasa vao mihinan-kanina daholo tokoa ? Misy toy izany saingy ny sasany angamba mbola zavatra hafa ihany no anton-diana mandrak’izao. Hafa indray raha hoe manao raharaham-pirenena toy ny dokotera sy mpitandro filaminana ary mpanao gazety. Hita ho tena mafy loha sy mbola tsy vonon-kiala amin’ilay fahamehana ara-pahasalamana aloha hatreto Ramalagasy satria arakaraky ny gaboraraka misy no maha ela an’io.Ary azo antoka fa tsy hitazam-potsiny izany ny fanjakana fa tsy maintsy hanenjana mba hifehezana ireo mafy hatoka.